7 Fibromyalgia को साथ सहन उपायहरु कसरी फाइब्रोमायालिया मुक्त गर्ने?
7 Fibromyalgia को साथ सहन को लागी सुझावहरु
13 / 06 / 2017 /1 टिप्पणी/i Fibromyalgia, दीर्घकालीन पीडा/av भोंड्ट
Ib युक्तिहरु Fibromyalgia को साथ सहन
बाट प्रभावित fibromyalgia र भित्तामा हिड्दै हुनुहुन्छ? हामी तपाईंलाई मद्दत गर्दछौं।
फाइब्रोमायाल्जियाले दैनिक जीवनमा ठूला चुनौतीहरू निम्त्याउन सक्छ। पुरानो दुखाइ सिन्ड्रोम हुनु साँच्चै गाह्रो हुन सक्छ। यहाँ7सुझावहरू र उपायहरू छन् जसले तपाईंलाई fibromyalgia को विशिष्ट लक्षणहरू हटाउन र तपाईंको दिन सजिलो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।
- पुरानो दुखाइ सिन्ड्रोमको बढ्दो बुझाइको लागि सँगै
पुरानो दुखाइ भएकाहरू मध्ये धेरैले उनीहरूलाई सुनेको वा गम्भीरतापूर्वक लिइएन जस्तो लाग्छ। त्यस्तो हुन दिन सकिँदैन । हामी पुरानो दुखाइबाट प्रभावित भएकाहरूसँग उभिन्छौं र यस विकारको बारेमा बढ्दो बुझाइको लागि तपाईंले यो लेख सोशल मिडियामा साझा गर्न अनुरोध गर्दछौं। अग्रिम धन्यवाद। मार्फत हामीलाई पछ्याउन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् फेसबुक og YouTube.
- ओस्लो मा Vondtklinikkene मा हाम्रो अन्तःविषय विभागहरु मा (Lambertseter) र Viken (Eidsvoll ध्वनि og Råholt) हाम्रा चिकित्सकहरूसँग पुरानो दुखाइको मूल्याङ्कन, उपचार र पुनर्वास प्रशिक्षणमा विशिष्ट रूपमा उच्च व्यावसायिक क्षमता छ। हामीसँग, तपाईलाई सधैं गम्भीरतापूर्वक लिइनेछ। लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुहोस् वा यहाँ हाम्रा विभागहरूको बारेमा थप पढ्नको लागि।
फाइब्रोमायल्जियाको साथ तपाईलाई उपयोगी हुन सक्ने व्यायाम र विश्राम प्रविधिहरूका साथ दुई उत्कृष्ट कसरत भिडियोहरू हेर्न तल स्क्रोल गर्नुहोस्।
प्रभावित? फेसबुक समूहमा सम्मिलित हुनुहोस् «संधिवात - नर्वे: अनुसन्धान र समाचारResearch यस र अन्य वायमेटिक डिसअर्डरहरूको बारेमा शोध र मिडिया लेखनको पछिल्लो अपडेटहरूको लागि। यहाँ, सदस्यहरूले पनि मद्दत र समर्थन लिन सक्दछन् - दिनको सबै समयमा - आफ्नै अनुभव र सल्लाहको आदानप्रदानको माध्यमबाट।
१. तनाव तल
तनाव ट्रिगर र fibromyalgia मा "फ्लेयर अप" पैदा गर्न सक्छ।
दैनिक जीवनमा तनाव कम गर्नाले जीवनको गुणस्तरमा सुधार र लक्षणहरू कम हुन सक्छ। तनावसँग लड्नका लागि सिफारिस गरिएका केही उपायहरू योग, माइन्डफुलनेस, एक्युप्रेसर, व्यायाम र ध्यान हुन्। सास फेर्ने तरिकाहरू र त्यस्ता प्राविधिक प्राविधिक कार्यहरूले पनि मद्दत गर्न सक्दछन्।
- आराम गर्न समय लिनुहोस्
उच्च मापदण्डहरू सेट गर्ने आधुनिक दिनमा यसलाई सजिलैसँग लिन सिक्नुहोस्। हामी दृढतापूर्वक दैनिक विश्राम सत्र सिफारिस गर्दछौं एक्युप्रेशर चटाई (थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् - लिङ्क नयाँ विन्डोमा खुल्छ)। यो भेरियन्टमा घाँटीको तकिया पनि समावेश गरिएको छ जसले माथिल्लो ढाड र घाँटीमा तनावपूर्ण मांसपेशीहरूमा काम गर्न सजिलो बनाउँदछ।
यो पनि पढ्नुहोस्: K ज्ञात ट्रिगरहरू जसले फिब्रोमायालियालाई बढावा दिन्छ
लेख पढ्न माथिको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
२. नियमित रूपले अनुकूलित प्रशिक्षण
फाइब्रोमाइल्जियाको साथ व्यायाम धेरै गाह्रो हुन सक्छ।
यद्यपि, व्यायामका केही रूपहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ - जस्तै नियमित, कम-तीव्रता व्यायाम, जस्तै हिड्ने वा तातो पानीको पोखरीमा व्यायाम गर्ने फाइब्रोमायल्जियाको लागि उत्तम उपचारहरू हुन्।
यसले तपाईंलाई दुखाई र कठोरता कम गर्न मद्दत गर्दछ, साथै तपाईंलाई पुरानो दुखाई निदानमा नियन्त्रणको बृद्धि प्रदान गर्दछ। तपाइँको लागि कस्तो प्रकारको व्यायाम कार्यक्रम उत्तम हुन सक्छ भन्ने पत्ता लगाउन तपाइँको डाक्टर, तपाइँको फिजियोथेरापिस्ट, तपाइँको काइरोपेक्टर वा एक चिकित्सकसँग कुरा गर्नुहोस् - यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने हामी तपाइँलाई हाम्रो Youtube च्यानल वा हाम्रो अन्तःविषय क्लिनिकहरू मार्फत मद्दत गर्न पाउँदा खुसी छौं।
फाइब्रोमायाल्जियाको कारणले शरीरको मांसपेशी र जोर्नीहरूमा पुरानो पीडा र कठोरता हुन्छ। यहाँ पाँच व्यायाम कसरत प्रोग्राम छ जुन तपाइँलाई तपाइँको पछाडि, हिप्स र श्रोणिलाई चालू राख्न मद्दत गर्दछ। अभ्यासहरू हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्।
हाम्रो परिवारमा शामिल हुनुहोस् र हाम्रो युट्यूब च्यानलको सदस्यता लिनुहोस् निःशुल्क व्यायाम सल्लाहहरू, व्यायाम कार्यक्रम र स्वास्थ्य ज्ञानको लागि। स्वागतम्!
भिडियो - रूमेटिस्टहरूको लागि Ex अभ्यास:
तपाईंले प्रेस गर्दा भिडियो सुरु हुँदैन? तपाईंको ब्राउजर अपडेट गर्ने प्रयास गर्नुहोस् वा हाम्रो YouTube च्यानलमा सिधा यो हेर्नुहोस्। सदस्यता लिने कुरा पनि नबिर्सनुहोस् - पूर्ण रूपमा नि: शुल्क - यदि तपाईं अधिक राम्रो प्रशिक्षण कार्यक्रम र अभ्यास चाहनुहुन्छ भने।
Hot. तातो स्नान
के तपाईं तातो स्नानमा आराम गर्न खुशी हुनुहुन्छ? यसले तपाईलाई राम्रो गर्न सक्छ।
तातो नुहाउने क्रममा मांसपेशिहरु आराम गर्न को लागी र छाना को एक सानो आराम गर्न को लागी दर्द हुन सक्छ। यस प्रकारको गर्मीले शरीरमा एन्डोर्फिन स्तर बढाउन सक्छ - जसले दुखाइको संकेतहरूलाई रोक्छ र निद्राको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सक्छ। हामी अन्यथा प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौं पुन: प्रयोज्य गर्मी प्याक (यहाँ उदाहरण हेर्नुहोस् - लिङ्क नयाँ विन्डोमा खुल्छ)। प्याकले यसलाई तताएर र त्यसपछि तनाव र दुखाइको मांसपेशीहरूमा राखेर काम गर्दछ।
C. क्याफिनमा काट्नुहोस्
एक बलियो कप कफी मनपर्छ? दुर्भाग्यवश, फाइब्रोको साथ हाम्रो लागि यो खराब बानी हुन सक्छ।
क्याफिन एक केन्द्रीय उत्तेजक हो- जसको मतलब हो कि यसले मुटु र केन्द्रीय स्नायु प्रणालीलाई 'उच्च सतर्कता' मा रहन उत्साहित गर्दछ। जब अनुसन्धानले देखाएको छ कि फाइब्रोमायल्जियाको साथ हामीसँग अति सक्रिय तंत्रिका फाइबरहरू छन्, हामीले महसुस गर्छौं कि यो आवश्यक रूपमा इष्टतम छैन। तर हामी तपाईंको कफी तपाईंबाट पूर्ण रूपमा टाढा लैजाँदैछैनौं - त्यो अविश्वसनीय रूपमा नराम्रो तरिकाले गरिएको थियो। बरु अलिकति तल झर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
यसको फलस्वरूप निन्द्रा र चिन्ताको गरीब गुण हुन सक्छ। त्यसैले क्याफिन सेवन सीमित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, किनकि फाइब्रोमायाल्जियामा पहिले नै धेरै नै सक्रिय तंत्रिका प्रणाली रहेको छ। विशेष गरी महत्त्वपूर्ण यो छ कि तपाईंले दिउँसो देखि कफी र उर्जा पेय पदार्थहरू त्याग्न सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईले ड्याफीफिनेटेड विकल्पहरूमा स्विच गर्न सक्नुहुनेछ?
यो पनि पढ्नुहोस्: यी7विभिन्न प्रकारका फाइब्रोम्यालगिया दर्द हो
प्रत्येक दिन - आफ्नै लागि केहि समय छुट्याउनुहोस्
फाइब्रोमाइल्जियाको साथ वास्तविक समय हाम्रो लागि अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
Fibromyalgia ले जीवनलाई सबै चुनौतिहरूसँग जटिल बनाउन सक्छ जसले तपाईंलाई फ्याँक्छ। त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो आत्म-हेरचाहको भागको रूपमा हरेक दिन आफ्नो लागि समय छुट्याउनुहुन्छ। तपाईंको शौकको मजा लिनुहोस्, संगीत सुन्नुहोस्, रमाईलो गर्नुहोस् - के गर्नुहोस् तपाईंलाई राम्रो महसुस गराउँछ।
यस्तो आत्म-समय जीवन लाई अधिक सन्तुलित बनाउन सक्छ, आफ्नो शरीर मा तनाव को स्तर कम र तपाइँ आफ्नो दैनिक जीवन मा अधिक ऊर्जा दिन सक्छ। सायद शारीरिक उपचार को एक मासिक घण्टा (उदाहरण को लागी, भौतिक चिकित्सा, आधुनिक chiropractic वा एकयुपंचर?) पनि राम्रो विचार हुन सक्छ?
The. दुखाइको बारेमा कुरा गर्नुहोस्
आफ्नो दुखाइ रोक्नुहोस्। यो तपाईको लागि राम्रो छैन।
फाइब्रोमायल्जिया भएका धेरै मानिसहरू जान्छ र दुखाइलाई आफैमा राख्छ - जब सम्म यो लामो हुँदैन र भावनाहरू लिन्छन्। फाइब्रोमायाल्जियाले दुबैलाई आफुमा तनाव गराउँछ, र तपाईंको वरपरका मानिसहरूलाई पनि - त्यसैले संचार कुञ्जी हो।
यदि तपाईं राम्रो महसुस गर्नुहुन्न भने - त्यसो भन्नुहोस्। भन्नुहोस् कि तपाईसँग केहि खाली समय छ, तातो नुहाउने वा यस्तै छ किनकि अहिले यो अवस्था हो कि फाइब्रोमायल्जिया चरम सीमामा छ। परिवार र साथीहरूले तपाइँको बिरामी र कुन खराब बनाउँछ जान्नु पर्छ। यस्तो ज्ञानको साथ, तिनीहरू समाधानको हिस्सा हुन सक्छन् जब तपाईंलाई सहयोग चाहिन्छ।
Say. छैन भन्न सिक्नुहोस्
फाइब्रोमायाल्जिया प्राय: जसलाई 'अदृश्य रोग' भनिन्छ।
यो भनिन्छ किनभने यो तपाईंको वरपरका मानिसहरूलाई तपाईं पीडामा हुनुहुन्छ वा तपाईं चुपचाप पीडित हुनुहुन्छ भनेर हेर्न गाह्रो हुन सक्छ। यहाँ यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्नो लागि सीमाहरू सेट गर्न सिक्नुहोस् र तपाईं के सहन सक्नुहुन्छ। तपाईंले काम गर्न र दैनिक जीवनमा व्यक्तिहरूको ठूलो अंश चाहेको बेला तपाईंले होइन भन्न सिक्नुपर्दछ - यो तपाईंको सहयोगी व्यक्तित्व र तपाईंको मूलभूत मानहरूको बिरूद्ध जान्छ भने पनि।
हामी यस विकारको साथ सबैलाई फेसबुक समूहमा सामेल हुन आग्रह गर्दछौं «संधिवात - नर्वे: अनुसन्धान र समाचार»- यहाँ तपाईं आफ्नो अवस्थाको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र समान विचारधाराका व्यक्तिहरूबाट राम्रो सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ।
फेरि, हामी चाहन्छौं å यस लेखलाई सोशल मिडियामा वा तपाईंको ब्लग मार्फत साझेदारी गर्न राम्रोसँग सोध्नुहोस् (लेखमा सिधा लिंक गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्)। पुरानो दुखाई भएकाहरूको लागि बुझ्नु र ध्यान केन्द्रित गर्नु दैनिक जीवनको लागि उत्तम कदम हो।
फाइब्रोमाइल्जिया र लामो दुखाइ निदानको लागि मद्दत गर्न सुझावहरू:
विकल्प A: FB मा सीधा साझेदारी गर्नुहोस् - वेबसाइट ठेगाना प्रतिलिपि गर्नुहोस् र यसलाई तपाइँको फेसबुक पेज मा वा एक सान्दर्भिक फेसबुक समूह मा टाँस्नुहोस् तपाइँ एक सदस्य हुनुहुन्छ। वा तलको "SHARE" बटन थिच्नुहोस् तपाइँको फेसबुक मा पोस्ट लाई अरु शेयर गर्न को लागी।
अगाडि साझेदारी गर्न यसलाई छुनुहोस्। एक ठूलो सबैलाई धन्यवाद जसले पुरानो दुखाई निदान र फाइब्रोमाइल्जियाको बढि समझलाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ।
प्रश्नहरू? वा तपाईं हाम्रो सम्बद्ध क्लिनिकहरू मध्ये एकमा अपोइन्टमेन्ट बुक गर्न चाहनुहुन्छ?
हामी पुरानो दुखाइको आधुनिक मूल्यांकन, उपचार र प्रशिक्षण प्रदान गर्दछौं।
एक मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् हाम्रो विशेष क्लिनिकहरू (क्लिनिकको अवलोकन नयाँ विन्डोमा खुल्छ) वा अन हाम्रो फेसबुक पृष्ठ (Vondtklinikkene - स्वास्थ्य र व्यायाम) यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन्। अपोइन्टमेन्टहरूका लागि, हामीसँग विभिन्न क्लिनिकहरूमा XNUMX-घण्टा अनलाइन बुकिङ छ ताकि तपाईंले आफूलाई उपयुक्त हुने परामर्श समय फेला पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हामीलाई क्लिनिक खोल्ने घण्टा भित्र पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग ओस्लोमा अन्तःविषय विभागहरू छन् (समावेश Lambertseter) र Viken (Råholt og ईड्सभोल)। हाम्रा दक्ष चिकित्सकहरू तपाईंबाट सुन्नको लागि तत्पर छन्।
अर्को पृष्ठ:5फाइब्रोम्यालगियाका लागि आन्दोलन अभ्यास
चित्र वा माथिको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/7-TIPS-FOR-Å-HOLDE-UT-MED-FIBROMYALGI.jpg?media=1648573622 368 700 भोंड्ट https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 भोंड्ट2017-06-13 20:07:332022-03-22 16:15:267 Fibromyalgia को साथ सहन को लागी सुझावहरु
धन्यवाद! यो राम्रो थियो ... सायद यो धेरै वर्ष पहिले सिक्नु पर्छ। एक पटक कार्पल टनेल सिन्ड्रोमको लागि शल्यक्रिया गरेको छ। अब समस्या अर्को हातमा छ। यी अभ्यासहरू प्रयास गर्नै पर्दछ। धन्यवाद! ?
कुन उत्तम हो: लिरिका (प्रेगाबालिन) वा न्युरोन्टिन (गाबापेन्टिन)? ओटेस्टाड चिरोप्रॅक्टर केन्द्रमा १००% स्थान विज्ञापन गरिएको: टर्नस चिरोप्रेक्टर वा ...